Montevideo မှာကြည့်ရအောင် ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | မွန်တီဗီဒီယို, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
တောင်အမေရိကတွင်ရီယိုဒီလာပလက်တာမြစ်ဝတွင်တည်ရှိသောနိုင်ငံငယ်တစ်ခုရှိသည် ဥရုဂွေး။ မြို့တော်သည်မြို့တော်ဖြစ်သည် မွန်တီဗီဒီယို ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမှာပါ ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်.
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏မြို့တော် Buenos Aires နှင့်နီးကပ်သောကြောင့်ခရီးသွားများစွာသည်အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ရန်အတွက်“ ရေကန်ကိုဖြတ်ကျော်” သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျယ်ဆုံးမြစ်များဖြစ်သောRío de la Plata သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရလေ့ရှိသည်။ သေးငယ်တဲ့မြို့၏ပုံမှန်။
2 Montevideo မှာဘာလည်ပတ်မလဲ
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၏မြို့တော်သည်ပင်လယ်အော်ဘေးတွင်ရှိသောတောင်တန်းများအတွက်အမည်ပေးထားပြီး၎င်းအမည်၏မူရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသောမူကွဲများစွာရှိသည်။ သူတို့အားလုံးသည်ကြိယာကိုတောင်ဟုခေါ်သောစကားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သမိုင်းကအဲဒါကိုပြောပြတယ် ၁၈ ရာစုပထမပိုင်းတွင်ပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်သူများရောက်ရှိလာကြသည် နှင့်မြို့တည်ထောင်ခဲ့သည်စတင်ခဲ့သည်။ ယခင်ရာစုအကုန်တွင်ပေါ်တူဂီလူမျိုးများသည် Buoniaos Aires ကမ်းခြေတွင် Colonia de Sacramento ဟုခေါ်သောသာယာလှပသောမြို့တစ်မြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ၁၇၂၃ မှာပေါ်တူဂီက Montevideo ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာစပိန်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ Buenos Aires မှရီယိုဒီလာပလက်တာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအချို့ရှေ့ဆောင်မိသားစုများနှင့်အတူ၊ အချို့ကဤမြို့မှ၊ အချို့ကကရီရီးယားကျွန်းစုမှရောက်ရှိလာပြီး၊ ဂူအာနီနီလူမျိုးများနှင့်အာဖရိကမှလူမည်းများနှင့်အတူ။
Montevideo နှင့်ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၏ယေဘုယျအားဖြင့် Buenos Aires နှင့် Argentina တို့၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသော်လည်းဘရာဇီးလ်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်မြေများနှင့်လည်းနီးကပ်မှုရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Buenos Aires ၏ဓနအင်အားကြီးမားသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏အကူအညီဖြင့်ရီယိုဒီလာပလက်တာကိုမြစ်တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်တစ်ခု၏လက်ထဲသို့မလိုချင်သောအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ယက်လုပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ဥရုဂွေးသည် ၁၈၂၈ တွင်လွတ်လပ်လာသည်။
ထို့နောက် XNUMX ရာစုအစမှာ နှင့်အိမ်နီးချင်းအာဂျင်တီးနား၏တူညီသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူလက်၌လက် ဥရောပသားများစွာစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်အထူးသဖြင့်အီတလီနှင့်စပိန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည် ၂၀ ရာစု၏ပထမဆယ်စုနှစ်များတွင်မွန်တီဗွီဗီဒီယိုနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
Montevideo သည်မြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်ပတ်မှုများမှစတင်သည် သမိုင်းဝင်ခမောက်။ ယခင်ကကျောက်တုံးများနှင့်ခံတပ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်Sarandíလမ်းလျှောက်သူနှင့် Plaza Independencia ကြားရှိတံခါးဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံအတွင်း၌ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အအုံများ၊ ပြတိုက်များ၊ သာယာလှပသည့်ကဖေးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဈေးဝယ်စင်တာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
La လမ်းသွားလမ်းလာSarandí မြို့တော်အဟောင်း၏အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ကိုဆက်သွယ်ပေးသော Old City သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည် ပလာဇာ Independencia နှင့်အခြားအပေါ် Main Squareဟောင်းပလာဇာမြို့တော်ဝန်။ ၎င်းသည်နံပါတ် ၂၅၀ မှ ၇၀၀ အထိသွားသည့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောဒေသတွင်းလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်များစွာရှိသောခံတပ်များဖြိုဖျက်သောအခါမြို့ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သဖြင့်ပလာဇာလွတ်လပ်ရေးကိုစီယာသည် Old City နှင့် New City အကြားဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာသည်။
သူ့ပတ်ပတ်လည်၌တည်ရှိ၏ Salvo နန်းတော်၊ Etévezနန်းတော်၊ အမှုဆောင်မျှော်စင်၊ Solíaပြဇာတ်ရုံနှင့် Puerta de la Ciudadelရန် ရင်ပြင်၏အလယ်ဗဟိုတွင်အမျိုးသားဂိုးသမားဟိုဆေးဂဗ်ဗာစီအာတီဂတ်စ်အားသူ၏ဂူဗိမာန်နှင့်အတူတည်ရှိသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့်အကြံပြုထားသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသည့် ၁၈၅၆ ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောဆိုလီယပ်စ်ပြဇာတ်ရုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်သည်။
ဒါ့အပြင်ကြာသပတေးနေ့၊ သောကြာနေ့၊ စနေနေ့ ၁၁း၁၂ ရက်မှာ gu ည့်လမ်းညွှန်တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ မွန်တီဗီဒီယိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ မရရှိလျှင်၊ သင်ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါနေ့မှအင်္ဂါနေ့မှတနင်္ဂနွေနေ့မှည ၁၁ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိသင်သွားနိုင်သည်။ သင့်အိမ်မှပြုလုပ်လိုပါကပြဇာတ်ရုံသို့ Solis App ကို သုံး၍ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြင့်သွားနိုင်သည်။
Montevideo တွင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာများမှာ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာနေရာ, Andes 197 ပြတိုက်2, ရိုးတံ၏ခြေရင်းမှာယဉ်ကျေးမှုအာကာသအဆိုပါ အစိုးရအိမ်ပြတိုက်အဆိုပါ Vilamajóအိမ်ပြတိုက်အဆိုပါ ကိုလံဘီယာမတိုင်မီနှင့်ဌာနေအနုပညာပြတိုက်အဆိုပါ အလှဆင်အနုပညာပြတိုက်, အနုပညာပြတိုက်, အနုပညာသမိုင်းပြတိုက်, မှတ်ဉာဏ်၏ပြတိုက်, ရွှေ့ပြောင်းပြတိုက်သို့မဟုတ်ဟောငျးအကောက်ခွန်ပြတိုက်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် ပွဲတော် မွန်တီဗီဒီယို၌အလွန်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိပြီး၎င်းကိုသင်သိရှိနိုင်သည် ပွဲတော်ပြတိုက်။ ဥရုဂွေးလူမျိုးများသည်လည်းဘောလုံးကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ ဘောလုံးပြတိုက်ပန်းကန်လုံးသို့မဟုတ် Peñarolပြတိုက်, နှင့် gaucho အစဉ်အလာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ရှိသေး၏ Gaucho ပြတိုက်။ ကိုလိုနီမှအိမ်များ၊ Casa Garibaldi၊ Romantic Museum သို့မဟုတ် Casa de Rivera ကဲ့သို့ပြတိုက်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသောအိမ်ဟောင်းများလည်းရှိသည်။
El Salvo နန်းတော် Montevideo ရှိနောက်ထပ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရက်စွဲများ 1928 ၎င်းကိုအထည်အလိပ်ညီအစ်ကိုများကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အထပ် ၂၇ ရှိပြီး ၁၀၅ မီတာမြင့်သောကြောင့်လက်တင်အမေရိကရှိအမြင့်ဆုံးမျှော်စင်သည် ၁၉၃၅ ခုနှစ်အထိဖြစ်သည်။
Montevideo သည်Río de la Plata ကိုလျစ်လျူရှုသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နွေရာသီသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီ၌သင်သွားလျှင်လမ်းလျှောက်ရန်ကောင်းသည်။ ၎င်း၏အဖြူရောင် arnas နှင့်သန့်ရှင်းသောရေကမ်းခြေ။ အဲဒီမှာ နီးပါး 30 ကီလိုမီတာ၏လမ်းခရီး ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ပြေးလွှားနေတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အဓိကအချက်များမှာဂျူးမီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်း၊ သတိရအောက်မေ့ပွဲများ၊ Escollera Sarandí၊ Punta Cárdenasမီးပြတိုက်၊ Montevideo Cartel၊ Plaza Virguilio နှင့် Puertito de Buceo တို့ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောခံစားရန် Montevideo ၏မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ ထို့နောက်သင်သည်လုပ်ရမည် တောင်ပေါ်ကိုသွား, ၁၃၅ မီတာအမြင့်နှင့်ထိပ်ဆုံးတွင်အထွေထွေခံတပ်ခံတပ်ရဲတိုက်ဖြစ်သည် မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးမျှော်စင် အဆိုပါ Aguada ရပ်ကွက်အတွင်းကနေ။
ညဘာလာသလဲ Montevideo အတွက် nightlife? အများဆုံးဂန္သည် တန်ဂိုကခုန်ရန် milongas နှင့်ကလပ်များရှိသည်, ခရီးသွားများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်နိုင် Buenos Aires ၏မှန်။
နွေရာသီမှာသင်ပျော်မွေ့နိုင်သည် နွေရာသီပြဇာတ်ရုံ, ပွင့်လင်းကောင်းကင်ပြာအောက်မှာ, သင်အစားအစာကြိုက်လျှင်ရှိကြ၏ ဟောငျးစီးတီး၏ gastronomic စျေးကွက်, အရသာ၏ကျယ်ပြန့နှင့်အတူ။ Mercado Agrícola de Montevideo တွင်စတိုးဆိုင် ၁၀၀၊ Sinergia Design, Ferrando Market, Siam Market နှင့် William Market တို့ရှိသည်။ အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » မွန်တီဗီဒီယို » Montevideo မှာကြည့်ရအောင်
Santo Domingo မှာဘာကြည့်ရမလည်း